DRK134 ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Drick တူရိယာ
PIastic Flexible စမ်းသပ်ခြင်းတူရိယာထုတ်ပိုး
သြစတြေးလျ IDM ထုတ်ကုန်များ
Concora အလတ်စား Fluter
DRKPL6 Handsheet ဟောင်းများ
internal Plybond စမ်းသပ်သူ
စက္ကူ Air ကို Permeability
PIastic Flexible ထုပ်ပိုးစမ်းသပ်ခြင်း
ကျသွား Dart သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်သူ
ဓာတ်ငွေ့ Permeability စမ်းသပ်သူ
ပွတ်တိုက်အားစမ်းသပ်သူ၏ရှိုက Surface မြှောက်ဖော်ကိန်း
အရည်ပျော် Flow Indexer
Surface က Resistance စမ်းသပ်သူ
500 စီးရီး X- RITES Spectrophotometer
disk ခွံ tester
Rolling အရောင် tester
SP စီးရီး X- RITES Spectrophotometer
တွန့် & ခိုင်မာသောစမ်းသပ်သူ
X- RITES Spectrophotometer
ပွတ်တိုက်အားစမ်းသပ်သူ၏ DRK127A မြှောက်ဖော်ကိန်း
DRK101A Touch ကို-screen ကိုဆန့ခွန်အားစမ်းသပ်သူ
DRK123 (PC ကို) ပုံး Compression ကိုစမ်းသပ်သူ
DRK134 Leak Tester is an advanced and intelligent tester designed according to related standard. It is applicable to test the seal property of flexible pack in food industry, pharmacy industry and daily chemical industry. Product Features Micro-computer control, LCD display, PVC operation board; Digital preset vacuum degree and vacuum maintenance time; World famous pneumatic components; Automatic supplementation for constant pressure; Automatic ending; Automatic reverse-pressure unloading. Pr...
DRK134 ယိုစိမ့်စမ်းသပ်သူ ဆက်စပ်စံနှင့်အညီဒီဇိုင်းအနေနဲ့အဆင့်မြင့်နှင့်အသိဉာဏ် tester ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဗူး, ဆေးဆိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်နေ့စဉ်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၏တံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့သက်ဆိုင်သည်။
micro-ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှု, LCD display ကို, PVC စစ်ဆင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့;
ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး pneumatic အစိတ်အပိုင်းများ;
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစမ်းသပ်မှု, ယိုစိမ့်စမ်းသပ်မှု, အထုပ်ပြည့်စုံစမ်းသပ်မှု, Micro-ယိုစိမ့်စမ်းသပ်မှု, အိတ်၏ CO2 ယိုစိမ့်ထောက်လှမ်း, အဖုအနာထုပ်ပိုး, ပုလင်း, etc တံဆိပ်ခတ်ထား
Flexible အထုပ်: အိတ်နို့ပါဝါ, ဒိန်ခဲ, ကော်ဖီချွတ် / အိတ်, လကိတ်မုန့်အထုပ်, အထုပ်တစ်ထုပ်, မြွေအစားအစာအထုပ်, လက်ဖက်ရည်အိတ်, လွယ်အိတ်ထဲမှာဆန်, အာလူးကြော်အထုပ်, ကိတ်မုန့်အထုပ်, မာနထောင်လွှားအစားအစာအထုပ်, Tetra Pak, စိုစွတ်သောတစ်ရှူးအိတ် , ဖရုံမျိုးစပါးအိတ်
ယခင်: ပွတ်တိုက်အားစမ်းသပ်သူ၏ DRK138 ရှိုက Surface မြှောက်ဖော်ကိန်း
နောက်တစ်ခု: DRK303 အရောင်အကဲဖြတ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့
© Copyright - 2017: အားလုံးအခွင့်အရေး။ - နေဖြင့်ပါဝါ Globalso.com
ရှန်ဒေါင်း Drick တူရိယာ Co. , LTD မှ
E-mail ကို: info@drktest.com